Nahazo fanavaozana lehibe ny app iOS MEGA's iOS. Vaovao IPhone
Betsaka aminareo no hahafantatra ny MEGA, mpandimby serivisy fitahirizana rahona ho amin'ny faramparan'ny MegaUpload, ahoana no hahakely izany, MEGA dia manana rindranasa ho an'ny iOS, na dia tsy ratsy aza izany, azontsika atao ny milaza fa tsy dia tsara loatra, na izany aza, izy io vao tsy ela akory izay no nahazo fanavaozana somary mahaliana izay mampitombo ny fahafaha-manao sy ny mahasoa azy amin'ny fitaovan'ny iOS. Ity serivisy rahona ity dia manolotra habaka 50GB ho antsika maimaimpoana izay afaka tantinay araka izay tadiavinay amin'ny alàlan'ity fampiharana ity, satria tsy mifanaraka tanteraka amin'ny Safari ny tranokalany ary miteraka olana sasany.
Araka ny efa nolazainay, MEGA dia manolotra tahiry 50GB maimaimpoana, na izany aza dia afaka misafidy ireo safidy samihafa amin'ny MEGA Pro izahay, mampitombo ny fitehirizana sy ny bandwidth na € 9,99 isam-bolana na € 99.99 isan-taona. Miaraka amin'ny fanavaozana farany farany dia nanavao ny endriny ny fampiharana, ary tsy izany ihany fa nitondra ny azy ihany kinova feno ho an'ny iPad ary koa ny kojakoja samihafa mba hahafahantsika mampakatra rakitra ho MEGA mivantana avy amin'ny rahona hafa izay ampiasainay amin'ny fitaovantsika.
Ny vaovao amin'ny fanavaozana dia izao manaraka izao:
Azo atao ny mampakatra rakitra avy amin'ny serivisy fitehirizana hafa.
Sintomy ny lahatahiry manontolo.
Mizarà fampirimana amin'ireo mpifandray.
Fikarohana tsara kokoa.
Alaharo ny anarany, ny daty na ny habeny.
Adikao ny lahatahiry.
Miova ny teny miafina.
Fanafoanana sy fiatoana amin'ny fisintomana sy ny fampakaranao.
Sokafy ny rohy MEGA avy amin'ny fampiharana.
Manokatra antontan-taratasy avy amin'ny MEGA.
Araka ny efa fantatrao, azonao atao ny misintona an'ity rindrambaiko maimaimpoana ity ao amin'ny App Store, na izany aza, mampalahelo fa ny MEGA dia hadino tanteraka tao anatin'ny mason'ny rahona fitahirizana, maro nanana fanantenana be izahay amin'ity serivisy ity izay niafara tamin'ny tsy fanamarihana na dia namela 50GB fitehirizana maimaimpoana aza noho ny famerana ny fampidinana sy ny tsy fitoviana amin'ny mpitety hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Nahazo fanavaozana lehibe ny fampiharana iOS an'ny MEGA
Fanavaozana tsara fa tsy hamela ahy hampakatra rakitra na tsy hitako ny safidy.
Satria miresaka momba ny fanavaozana ianao dia andramo aloha. Ity fanavaozana ity dia nameno ilay fampiharana satria tsy azonao ampiasaina intsony ireo rindranasa miaraka amin'ireo fisie. Andao hojerentsika raha hamaha izany tsy ho ela izy ireo. Juan
barcelonalife dia hoy izy:
toa tsy miasa amin'ny IOS 9
Mamaly an'i barcelonavida
Tsy afaka mitendry ireo audio alaina amin'ny fampiharana intsony ianao, vakio ity
Olona iray hanampy ahy nanana kaonty mega aho ary nanana sary maro voatahiry ianao ary indray andro dia nanokatra ny app aho ary nahazo hadisoana zavatra toa an'io ary nakatona ary rehefa te-hanokatra ny kaontiko aho dia tezitra aho. enta-mavesatra nefa tsy misokatra oO ary tsy olana amin'ny Internet izany, misy olona afaka manampy ahy misaotra